China Bougainvillea Spectabilis Ifuru Osisi N'èzí Osisi ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Anwụ na-acha Ifuru
Bougainvillea Spectabilis Ifuru Osisi N'èzí Osisi
Bougainvillea bụ obere osisi shrken nke nwere ifuru na-acha ọbara ọbara ma na-egbuke egbuke. Flowerdị ifuru ahụ buru ibu. Ihe nkwado ọ bụla 3 na-achịkọta obere okooko osisi triangular, ya mere a na-akpọkwa ya ifuru triangle. Ha kwesịrị ekwesị maka ịkọ ubi ma ọ bụ ikiri ihe nkiri. Enwekwara ike iji ya maka bonsai, hedgerow na trimming. Bougainvillea nwere uru ịchọ mma dị elu ma were ya dị ka ị na-arịgo ifuru maka mgbidi n'akụkụ ndịda China.
Nkwakọ ngwaahịa: n'okwu osisi ma ọ bụ na ịgba ọtọ
Ọnọdụ kachasị mma maka uto maka bougainvillea bụ 15-20 Celsius, mana ọ nwere ike iguzogide ogo dị elu nke 35 Celsius n'oge ọkọchị ma jigide gburugburu ebe na-erughị ogo 5 Celsius n'oge oyi. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru ogo 5 Celsius ruo ogologo oge, ọ ga-adaba na oyi na-ada akwụkwọ. Ọ na-enwe mmasị ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ, ọ naghị ajụ oyi. Ọ nwere ike ịlanarị oge oyi n'oge nchekwa na okpomọkụ karịa 3 Celsius C, na oge ntoju na okpomọkụ dị elu karịa 15 Celsius C.
Bougainvillea dị ka ìhè ma bụrụ okooko osisi dị mma. Enweghi ezughị oke na oge eto ga-eduga na uto na-adịghị ike nke ahịhịa, na-emetụta buds ime ime na ifuru. Ya mere, umuaka ndi anakpoghi ohuru n’ile n’ile kwesiri itinye ya na ndo. Ekwesiri itinye ya na windo nke chere ihu n'ebe ndịda n'oge oyi, oge anwụ ekwesịghịkwa ịbụ ihe na-erughị awa 8, ma ọ bụghị na ọtụtụ akwụkwọ ga-apụta. Maka okooko osisi dị mkpirikpi, a na-achịkwa oge ọkụ kwa ụbọchị n'ihe dịka elekere 9, ha nwere ike ịmị ma too okooko mgbe otu ọnwa na ọkara gachara.
Bougainvillea na-ahọrọ ala rụrụ arụ na ala na-eme nri nke ọma, zere ịmị mmiri. Mgbe ị na-akpụ ite, ị nwere ike iji otu akụkụ nke akwụkwọ mulch ọ bụla, ala peat, aja aja, na ala ubi, ma gbakwunye obere mkpochapu achicha dị ka fatịlaịza isi, ma jikọta ya ka ọ bụrụ ala ubi. Okooko osisi ga-repotted na-anọchi na ala otu ugboro n'afọ, na oge kwesịrị tupu germination na mmalite oge opupu ihe ubi. Mgbe ị na-edegharị, jiri mkpa iji belata alaka na osisi dị egwu.
A ga-agba mmiri mmiri otu ugboro n’ụbọchị n’oge opupu ihe ubi na udu n ’oge mgbụsị akwụkwọ, na otu ugboro n’ụbọchị n’ụtụtụ na n’anyasị n’oge ọkọchị. Ke ini etuep, okpomọkụ dị ala ma osisi dị na ụra ala. Mmiri kwesịrị ịchịkwa ka ite ala dị na mmiri.
Nke gara aga: Bougainvillea Bonsai Okooko Osisi
Osote: Single ogwe Pachira Macrocarpa Foliage Bonsai Plants
Bougainvillea Osisi Ifuru